Hercules ၏ဒဏ္ာရီ (Hercales): အနှစ်ချုပ် - UniProyecta
အ ဂရိဒဏ္ာရီ ၎င်းတို့ကိုရှေးဟောင်းဂရိယုံကြည်ချက်များ၏ဒဏ္gendsာရီများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်၊ အထူးသဖြင့်အရှေ့မြေထဲပင်လယ်၌တည်ရှိသော၎င်းတို့၏ရှေးယဉ်ကျေးမှု လူသိများတဲ့ဒဏ္ာရီတွေထဲကတစ်ခုကတော့ဒဏ္ာရီပါ Heracles, ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ ဟာကြူလီ ရောမများအတွက်
1.1 ဟာကြူလီ၏အလုပ် ၁၂ ခု
2 Heracles သို့မဟုတ် Hercules?
ဒဏ္mythာရီလာအရ Heracles သည် Zeus နှင့် Alcmena ၏သားဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် Zeus က Alcmena ရဲ့ခင်ပွန်းအဖြစ်လက်ခံခဲ့ပြီး Zeus က Host ကိုခေါ်ပြီးစစ်တိုက်သွားပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးသူ့ပုံစံကိုမွေးစားခဲ့တယ်။ ဤနည်းဖြင့်သူမနှင့် Heracles သားတစ်ယောက်ရလာသည်။ ၎င်းသည် Zeus ၏ဇနီးအဖြစ် Heracles လူငယ်များအတွက်ပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များကိုဖြစ်စေခဲ့သည်။ Heraဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့်သင်ယူခြင်းနှင့်ဒေါသထွက်ခြင်းတို့ကြောင့်သူသည် Heracles ၏ဘ ၀ ကိုနှိပ်စက်ရန်သူသည်ငယ်စဉ်ကတည်းကတာဝန်ယူခဲ့သည်။
Heracles မဟုတ်ပါ သူသည်အလွန်ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှု (သို့) အသိဥာဏ်ပညာကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်၊ သူအနှစ်သက်ဆုံးအရာများမှာဝိုင်၊ အစားအစာနှင့်အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်မရ။ သူသည်အလွန်ဒေါသကြီးသည်၊ သူသည်ဒေါသအားဖြင့်သူ့ကိုယ်သူသယ်ဆောင်ခွင့်ပြုသည့်အခါတိုင်းသူ၏တိုင်းတာနိုင်သောခွန်အားကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးသွားစေသည်။ သို့သော်ဤအရာသည်အရာရာမကောင်းဟုမဆိုလိုပါ။ တစ်ချိန်ကစိတ်တည်ငြိမ်သွားပြီးကတည်းကသူ့လုပ်ရပ်တွေရဲ့အလေးချိန်ကိုနားလည်လာပြီးထိုက်တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုလက်ခံခဲ့တယ်။ ကျူးလွန်လာမယ့်အချိန်အတွင်းမှာသူတို့ရဲ့အင်အားကိုမသုံးဖို့ပြောပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ကကြာတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂရိသူရဲကောင်းသည် Megara နှင့်ဆိုးရွားသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကျရောက်ခဲ့သဖြင့်ကလေးများရှိခဲ့သည်။ Zeus ရဲ့ဇနီး Hera၊ ငါတို့ကပြောခဲ့သလိုဘဲ၊ Hercules ကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တာကသူ့ထက်ပိုသန်မာခဲ့တာကြောင့်သူ့ကိုအချိန်တစ်ခုအထိမှတ်ဥာဏ်တွေဆုံးရှုံးစေခဲ့တယ်။ Heracles သည်စိတ်ရှုပ်ထွေးကာသူ၏ဇနီးနှင့်ကလေးသုံးယောက်ကိုသွေးအေးအေးဖြင့်သတ်ပစ်ခဲ့ပြီးသူ၏မှတ်ဥာဏ်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသောအခါသူသည်ဝမ်းနည်းမှုနှင့်နာကျင်မှုတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ သူ၏လုပ်ရပ်များအားဖြေရှင်းရန်သူသည်သူ၏လုပ်ရပ်များအတွက်အပြစ်ဒဏ်အဖြစ် Oracle of Delphi သို့လည်ပတ်ပြီးနောက်တာဝန် ၁၂ ခုထမ်းဆောင်ရန်သဘောတူခဲ့သည်။
ဟာကြူလီ၏အလုပ် ၁၂ ခု
အပ်နှင်းထားသောအလုပ်များ၊ စာရင်းများ ဟာကြူလီသူ၏အပြစ်များကိုစင်ကြယ်စေရန်နှင့်သူ့အားထာဝရအသက်ပေးရန်အလို့ငှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
သတ်ပစ်လိုက်ပါ Nemean ခြင်္သေ့
သတ်ပစ်လိုက်ပါ Lerna ၏ Hydra
ဖမ်းယူပါ Cerinea သမင်
ဖမ်းယူပါ Erymanthus ဝက်ထီး
သန့်ရှင်းရေး Augean မြင်းဇောင်း တစ်နေ့မှာ
သတ်ပစ်လိုက်ပါ Stymphalian ငှက်များ
ဖမ်းယူပါ Cretan Bull
ခိုးယူပါ ဘုရင် Diomedes ၏ Mares
ခါးစည်းကိုပြန်လည်ရယူပါ Hippolyta, Amazons ၏ဘုရင်မ
ပန်းသီးကိုခိုးယူသည် Hesperides ဥယျာဉ်
ဖမ်းပြီးပြန်ယူပါ Cerberus, Underworld ၏အုပ်ထိန်းသူ
နောက်ဆုံးတော့ဟာကြူလီ သူသည်ဤခက်ခဲသောအလုပ် ၁၂ ခုကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဂရိသမိုင်းတွင်အကြီးမြတ်ဆုံးသူရဲကောင်းအဖြစ်သူ၏နေရာကိုရရှိခဲ့သည်။ နောက် Achillesဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့ကနောက်ထပ်ဂရိဒဏ္ာရီတစ်ခုမှာတွေ့လိမ့်မယ်။
Heracles သို့မဟုတ် Hercules?
သူမွေးလာတဲ့အခါသူ့မိဘတွေကသူ့ကိုခေါ်တယ် Alcides သည်သူ၏အဖိုး Alceo အားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်မရ။ ထိုအချိန်က Apollo နတ်ဘုရားသည် Heracles ဟူသောအမည်အား Heracles ၏ကျွန်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဂရိလူမျိုးများသည်ဤအမည်ဖြင့်သူ့ကိုသိကြသည် ရောမတွေကသူ့ကို Hercules လို့ခေါ်ကြတယ်မရ။ ယခုအချိန်ထိသူ့ကို Hercules ဟုအများအားဖြင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး၊ ထို့ကြောင့်ကျန်မှတ်တမ်းများတွင်ထွင်းထားခဲ့သည်။
ဤကျော်ကြားသောဇာတ်ကောင်သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူ၏ဂုဏ်အသရေ၌သိုမှီးခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်သူသည်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးများစွာရလိုပြီး၎င်းတို့မှကလေးများစွာမွေးဖွားခဲ့သည်။ မူမမှန်ဘဲစိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောဘ ၀ ၏အကျိုးဆက်သည်သူသေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်.
ဒဏ္ာရီအရ Hercules တွင်ဇနီးလေးယောက်ရှိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးသူမှာ Megara ဖြစ်ပြီးသူသည်ကလေးပေါင်းများစွာရခဲ့ပြီးဒေါသဖြစ်ကာသေဆုံးခဲ့သည်။ သူမအသက်ရှင်လျက်ကျန်ရစ်ခဲ့သလား (သို့) သူမ၏ခင်ပွန်းသေဆုံးခြင်းလားဆိုသည်ကိုမသိရသေးပေ။ သူသည်ဒုတိယမြောက်အမျိုးသမီးနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည် ဘုရင်မ Omphaleပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကျွန်ဖြစ်သွားတယ်၊ သူတို့ဘယ်လိုအဆုံးသတ်သွားလဲမသိဘူး။
ထို့နောက်သူသည် Deyanira နှင့်လက်ထပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်သူ၏တတိယအိမ်ထောင်ဖြစ်သည်မရ။ ဟာကြူလီသည်သူမနှင့်အတူရှိရန်မြစ်နတ်ဘုရား Achelous ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရသည်။ သူမသည် Olympus ကိုဘုရားအဖြစ်မသွားမီကသူ၏နောက်ဆုံးဇနီးဖြစ်ခဲ့သည်။ Hercules ရေကူးနေစဉ် Centaur Nesus သည်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သော centaur Nesus သည်သူတို့၏အသက်တာကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့သည်။
ရဲရင့်သော centaur သည်အခိုက်အတန့်ကိုဖမ်းပြီးသူမကိုပြန်ပေးဆွဲရန်ကြိုးစားသည်။ ဤဆိုးရွားသောလုပ်ရပ်သည်သူမ၏ခင်ပွန်းကိုအလွန်ဒေါသထွက်စေခဲ့ပြီး hydra Lerna ၏သွေးဖြင့်အဆိပ်ဖြင့်မြှားဖြင့် Neso ကိုပစ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ခဲ့ပါ။ ဤအရာသည်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်သို့ရောက်ပြီးသူ့ကိုသတ်ခဲ့သည်။ သူ့ဝေဒနာကို သူသည် Hercules ကိုလက်စားချေရန်မကောင်းသောထောင်ချောက်တစ်ခုဖြင့်လှပသော Deyanira ကိုလှည့်စားခဲ့သည်.
Neso သည် Deyanira အားသူ၏သွေးကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူစေပြီး၎င်းသည်သူမ၏ခင်ပွန်းသည်အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး အားသတိမပြုမိစေရန်တားဆီးခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏အ ၀ တ်များအပေါ်သို့သွန်းလောင်းရန်လိုလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်သူ၏အရေပြားကိုအနည်းငယ်ထိရုံနှင့်လောင်ကျွမ်းစေသောသေစေတတ်သောအဆိပ်တစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့်အဖြစ်မှန်နှင့်ခြားနားသည်။
အပြစ်မဲ့ Deyanira သည်သူမ၏ချစ်လှစွာသောခင်ပွန်းအားအမှတ်မထင်သတ်ဖြတ်ခဲ့ပုံဖြစ်သည်မရ။ ဟာကြူလီသည်သေစေနိုင်သောအဆိပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းမရပ်နိုင်ခဲ့ပေ။ သူသေသောအခါ Olympus နတ်ဘုရားများကသူ့ကိုလုံးဝမသေနိုင်ပါ။ သူ၏ဘဝသစ်တွင်သူ၏စတုတ္ထဇနီး Hebe နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။
Hercules ၏ဤအကျဉ်းချုပ်ဂရိဒဏ္mythာရီကိုသင်ကြိုက်လျှင်ဂရိဒဏ္ာရီအားလုံး၏ဘုရားများနှင့်ဂရိဒဏ္heroesာရီများ၏ဂရိဒဏ္ာရီများစွာရှိသည်။ မင်းမှာပိုပြီးအသေးစိတ်ကြည့်ချင်တဲ့တိကျတဲ့မေးခွန်းတွေ၊ ဒဏ္sာရီတွေရှိရင်ကျေးဇူးပြုပြီးငါတို့ကို comment တစ်ခုချန်ထားခဲ့ပါ၊ ငါတို့ကူညီဖို့ကြိုးစားမယ်။
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ယဉျကြေးမှု » ဂရိဒဏ္ာရီများ » ဟာကြူလီ၏ဒဏ္ာရီ